आश्वासन आउँछ, सञ्चालन हुँदैन
सिन्धुपाल्चोक, फागुन १४ गते । तत्कालीन समयको दक्षिण एसियाकै ठूलो मानिएको नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट १७ वर्षसम्म बन्द हुँदा पनि पुनः सञ्चालनका लागि सरकारीतर्फबाट खासै पहल भएको देखिँदैन । सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका– ८ लामो साँघु र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा रहेको सो उद्योग सरकारी बेवास्ताकै कारण सुचारु हुन नसकेको हो । विगतमा सरकारका दर्जनभन्दा बढी उद्योगमन्त्रीले पटक–पटक जीर्ण उद्योगमा आएर स्थलगत अवलोकन गर्दै पुनः सञ्चालन गराउने आश्वासन दिए पनि हालसम्म ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग सुचारु हुनसकेको छैन । तीन वर्षअघि तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले बन्द उद्योगको निरीक्षण गर्दै छिट्टै सञ्चालनमा ल्याई छाड्ने दाबी गर्नुभएको थियो ।
एमाले नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्य उद्योगमन्त्री हुँदा उहाँले पनि उद्योगको निरीक्षण गरी चाँडोभन्दा चाँडो उद्योग सुचारु हुने आश्वासन दिनुभएको थियो । ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योगको स्थलगत भ्रमण गर्दै तत्कालीन उद्योगमन्त्री कर्णबहादुर थापाले उद्योग डेढ महिनाभित्रमा सञ्चालनमा आएरै छाड्ने जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँहरू सबै मन्त्रीले उद्योग छिट्टै सञ्चालन हुने र स्थानीयलाई गाउँमै रोजगारीको वातावरण दिलाउने आश्वासन गफमा मात्र सीमित भएको छ । उद्योग बन्द भएपछि बनेका हरेक सरकारका उद्योगमन्त्रीले उद्योगको स्थलगत अनुगमनमा मात्र लाखौँ रुपियाँ खर्च गरे पनि यो उद्योग सञ्चालनमा आउने हालसम्म कुनै सङ्केत देखा परेको छैन । १७ वर्षसम्म उद्योग बन्द हुँदा राज्यलाई ठूलो घाटा भइरहेको छ भने सयौँ जनशक्तिको रोजीरोटी गुमेको छ । श्रमशक्ति र कच्चा पदार्थ पर्याप्त भए पनि सरकारले महìव नदिँदा उद्योग खुल्ने सङ्केत टर्दै गएको देखिन्छ । उद्योग सुचारु नहुँदा भौतिक संरचना र मेसिन औजार जीर्ण हुँदै गइरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूले उद्योग तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउने र सयौँलाई रोजगारी दिलाउने मात्रै चुनावी नारा मात्रै बनाउने गरेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि उद्योग सञ्चालन गराउने बारे ठोस काम केही गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिले उद्योगलाई चुनावी र दलीय मुद्दा मात्रै बनाएको स्थानीय राजकुमार श्रेष्ठले गुनासो पोख्नुभयो ।
अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले नेपाल सरकार र भारतको उडिसा इन्डष्ट्रिजको संयुक्त पहलमा वि.सं. २०३६ सालमा तीन अर्ब ५९ करोड रुपियाँ लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा आएको थियो । उद्योग स्थापना गर्दा सरकार र उडिसा इन्डष्ट्रिजले वार्षिक ५० हजार मेट्रिक टन डिबीएम (डेडवर्न म्याग्नेसाइट) उत्पादन गर्ने गरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि उद्योग सञ्चालन भएदेखि नै वार्षिक २० हजार मेट्रिक टन मात्र डिबीएम उत्पादन गरेको थियो । कारखाना निर्माण सकेर परीक्षण उत्पादन कार्य थालिएकोमा सन्तोषजनक उत्पादन नभएपछि लामो समय परीक्षण कार्य गरिएको उद्योगका कार्यकारी निर्देशक दिनेशराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । डेडवन्र्ट म्याग्नेसाइट धेरै पटकको परीक्षणमा उत्पादन गर्दा अत्याधिक धूलो भई बिक्रीयोग्य डिबीएम उत्पादन हुन नसकेपछि उद्योग बन्द भएको उहाँले बताउनुभयो । सरकार र साझेदारी कम्पनी बीचको अदूरदर्शी नीतिका कारण ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग वि.सं. २०५८ सालदेखि बन्द भएको हो । म्याग्नेसाइटमा कार्यरत पुराना कामदारको भनाइ अनुसार बिक्रीयोग्य डिबीएम उत्पादन भएको तर बीचमै उच्च ओहदाका कर्मचारीको चलखेलले उद्योग बन्द भएको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
वर्षौंदेखि बन्द उद्योगका सबै संरचना बिग्रिँदै गएका छन् । डिबीएम भट्टी कारखाना रहेको स्थान भासिँदै गइरहेको छ । तल्लो स्थानको पदार्थ सङ्कलन केन्द्र, ल्याब भत्किएर ध्वस्त अवस्थामा रहेको छ । उद्योग बन्द हुँदा सयौँ जनशक्ति बेरोजगार भएका छन् । दोलखा जिल्लाबाट उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ १६ करोड रुपियाँको लागतमा रोपवे निर्माण गरी ल्याइएको थियो । अहिले उक्त रोपवे जीर्ण र लथालिङ्गको अवस्थामा छ । खिया लागेर तहसनहस भएको छ । ठाउँठाउँमा भाँचिएर पूरै बिग्रेको छ । उद्योग सञ्चालन हुनसके सयौँ व्यक्तिले रोजगारी पाउन सक्नेछन् । के हो म्याग्नेसाइट ? म्याग्नेसाइट जमिनभित्र पाइने एक प्रकारको खनिज पदार्थ हो । ओरियन्ट म्याग्नेसाइट पनि त्यही खनिज पदार्थलाई प्रशोधन गरी उत्पादन गरिन्छ । म्याग्नेसाइट उद्योग डिबीएम प्लान्ट र टल्क (खरी धूलोको उत्पादन) गर्ने दुईवटा छुट्टाछुट्टै मेसिन हुन्छ । डिबीएम प्लास्टबाट उत्पादित बिक्रेट ठूला ठूला फलाम, स्टिल र सिमेन्ट उद्योगमा कच्चा पदार्थ पलाग्नका लागि प्रयोग गरिन्छ । त्यसरी ‘टल्क प्लास्ट’बाट उत्पादित खरिको धूलो, मञ्जन, साबुन, क्रिम, बल्पेनलगायत सामग्री उत्पादन गरिँदै आएको निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ । यस्तो उद्योग नेपालमा हालसम्म एउटा मात्र रहेको उहाँले भन्नुभयो ।